August 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Computer software Recovery tools
Maung Pauk at 5:17:00 PM 0
Wondershare Data Recovery ဟာ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေ၊ Virus ကြောင့် ပျက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေ၊ ရုတ်တရက် မီးပြတ်သွားလို့ ကွန်ပျူတာ ပါဝါပိတ်သွားပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ Format ချမိတဲ့ဖိုင်တွေကိုပါ ပြန်ရှာပေးနိုင်ပါတယ်.. ကွန်ပျူတာသုံး Hard disk, External Hard Disk Drive, Memory Stick, SD Card, Memory Card, Floppy Disk, Zip Disk, iPod (Nano, Classic & Shuffle), Cell Phones: Black Berry, Nokia, Android phone စတဲ့ Storage Device အမျိုးမျိုး ပေါ်က ဖိုင်စနစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်.. မြန်လည်းမြန်တယ်..
Setup နဲ့ Install လုပ်.. ပြီးခါနီးမှာ Launch ဘေးက အမှန်ခြစ်ကိုဖြုတ်ပြီး finish ကိုနှိပ်..
Crack ထဲက Register.dll ဖိုင်ကိုကူးပြီး Install Directory ထဲကိုထည့်လိုက်.. Overwrite တောင်းရင် သဘောတူလိုက်ပါ..
( Install Directory ကိုသွားဖို့က လွယ်ပါတယ်.. Desktop ပေါ်က Wondershare Data Recovery icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရပြီ.. )
Home Page : https://datarecovery.wondershare.com/
Download Wondershare Data Recovery 6.0.0.13 : 25.5 MB
Computer software Programming Softwares Text Editor
Programmer တွေအတွက် Emurasoft EmEditor Professional v17.1.0
Maung Pauk at 11:38:00 PM 0
Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီး Launch ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ကာ Finish ကိုနှိပ်ပါ..
Patch Folder ထဲက Patch zip ကိုဖြည်လို့ရလာတဲ့ EmEditor_16.x.exe ဖိုင်ကိုကူးပြီး Desktop ပေါ်က EmEditor icon ကို ညာကလစ်ထောက်၊ Open File Location ကိုနှိပ်ပြီး Paste ချပေးလိုက်ပါ.. အဲဒီထဲမှာပဲ EmEditor_16.x.exe ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Run As Administrator နဲ့ဖွင့်ပါ.. ပြီးရင် Patch ကိုနှိပ်ပါ.. Close ကိုနှိပ်ပြီး EmEditor_16.x.exe ကိုပိတ်ပစ်ပါ.. ဒါဆို အဆင်ပြေပါပြီ.. လိုရမယ်ရ ကီးတောင်းလာခဲ့ရင် အင်တာနက်ပိတ်ပြီး ကီးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ..
Home Page : https://www.emeditor.com/
Download Emurasoft EmEditor Professional v17.1.0.rar : 10.38 MB
Maung Pauk at 6:51:00 PM 1
Maung Pauk at 12:28:00 AM 0
Samsung တွေကို FRP ဖြုတ်တဲ့ Tool ပါ.. USB Debugging သိဖို့လိုပါတယ်..
Locked ကျနေတဲ့ဖုန်းကို USB Debugging On နည်း
One click tool အနေနဲ့အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ Combination ဖိုင်အရင်ရေးပြီးမှ tool ကို အသုံးပြုလို့ရပါမယ်။
Tool ကိုသုံးပြီး FRP ဖြည်နည်း
Ref : MobileRepairService+
Download Samsung FRP Tool (Nougat Support) 1.0.zip : 4.14 MB
Firmware Huawei Huawei Firmware
Y535D-C00 Dead Fixed and Network Fixed Firmware (100%)Tested
Maung Pauk at 11:07:00 PM 0
Firmware ရေးပီးလို့ Network Lock ကျခဲ့ပါက Root ဖောက်ပီး network lock fix ထဲက Bat file လေး run ပေးလိုက်ပါ။ လိုရမယ်ရ qcn file လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
Ref : Mobile K.S.E
Download : 456 Mb
Maung Pauk at 9:53:00 PM 0
Odin တွေ တစ်ခုချင်းလိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူး.. ဒီ Software တစ်ခုတည်းနဲ့ အဆင်ပြေတယ်..
ကိုထက်အောင်မိုး ဆီက ယူလာတာ...
Download Odin Collection Pack : 19.16 Mb
Qualcomm Block Backup ထုတ်တာ မြန်လည်း မြန်တဲ့ 100% Tool လေးပါ။ Tutorial Video လေးပါ တင်ပေးထားပါတယ်...
Credit : unbrickandroid.com
Ref : Taunggyi Mobile Fimily
Download eMMC Adb Dumper.rar: 2.71 Mb
ဒီ Unlock Tool သည် Mi Model အားလုံးကို Support လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို
Bypass Mi account (2)
ဆိုပြီး Tool အတွက် Interface လုပ်ပေးထားပါယ်
၁။ ဖုန်းကို Recovery Mode သို့ဝင်ပါ။
၂။ ကွန်ပျူတာဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Bypass Mi account ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
၃။ Process Info ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Information ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
Developed By Ray Marm Aung
Ref : ဇူးနစ်
Download Mi Unlock.rar : 1.93 Mb
Maung Pauk at 12:26:00 AM 0
XioMiTool Online Update tool ဟာ Xiaomi Smartphone တွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Online ကနေ တိုက်ရိုက် Update လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. Bootloader Lock/Unlock တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ မလိုပါဘူး.. Phone မှာ USB Debugging ကို Enable လုပ်ထားပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်၊ Tool ကိုဖွင့်၊ Tool က ကိုယ့်ဖုန်းကို သိပြီဆိုရင် Select လုပ်ပြီး Select ကိုနှိပ်၊ Yes ကိုနှိပ်၊ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် Update ကို သူ့အလိုအလျောက် ရှာပေးလိမ့်မယ်၊ တွေ့ရင် Yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်၊ နောက်ထပ်အခြေအနေမှာ Developer Rom လား၊ Stable ROM လား.. Global လား/China လား.. ရွေးပေးလိုက်.. နောက်တော့ Tool က ပြတဲ့အတိုင်းအဆင့်ဆင့်လိုက်သွားရင် Update ရပြီ... Update ပြီးရင် Data တွေအားလုံး Format ကျသွားမှာမို့ Update မလုပ်ခင် ကိုယ့် Data တွေကို Backup လုပ်ထားကြပါ.. အောက်မှာ Video Tutorial တင်ပေးထားပါတယ်..
XioMiTool Online Update tool ဟာ Xiaomi Smartphone တှကေို ကှနျပြူတာနဲ့ခြိတျဆကျပွီး Online ကနေ တိုကျရိုကျ Update လုပျပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.. Bootloader Lock/Unlock တှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားဖို့ မလိုပါဘူး.. Phone မှာ USB Debugging ကို Enable လုပျထားပွီး ကှနျပြူတာနဲ့ ခြိတျ၊ Tool ကိုဖှငျ့၊ Tool က ကိုယျ့ဖုနျးကို သိပွီဆိုရငျ Select လုပျပွီး Select ကိုနှိပျ၊ Yes ကိုနှိပျ၊ ကိုယျ့ဖုနျးနဲ့ လိုကျဖကျမယျ့ Update ကို သူ့အလိုအလြောကျ ရှာပေးလိမျ့မယျ၊ တှရေ့ငျ Yes ကိုနှိပျပေးလိုကျ၊ နောကျထပျအခွအေနမှော Developer Rom လား၊ Stable ROM လား.. Global လား/China လား.. ရှေးပေးလိုကျ.. နောကျတော့ Tool က ပွတဲ့အတိုငျးအဆငျ့ဆငျ့လိုကျသှားရငျ Update ရပွီ... Update ပွီးရငျ Data တှအေားလုံး Format ကသြှားမှာမို့ Update မလုပျခငျ ကိုယျ့ Data တှကေို Backup လုပျထားကွပါ.. အောကျမှာ Video Tutorial တငျပေးထားပါတယျ..
Ref : GSM Helpful
Download XMT 0.4.0.zip: 113.1 MB
Maung Pauk at 10:25:00 PM 0
Windows 10 အတွက် Shortcut Keys တွေပါ.. Microsoft ကရေးထားတဲ့ pdf ဖိုင်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Download Shortcut Keys for Windows 10.pdf: 619 Kb